Filtrer les éléments par date : mardi, 01 octobre 2019
mardi, 01 octobre 2019 22:37
Andramasina: Namela takaitra ny rivotra nisafotofoto sy ny havandra
Niendaka ny tafo, nidaboka ny andrin-jiro, tapaka ny hazo, niraradraraka ny havandra, simba ny trano, fiara… Namela takaitra taty Andramasina, Faritra Analamanga ny safotofoton’ny rivotra narahina orana sy havandra androany tolakandro.
mardi, 01 octobre 2019 19:27
Bakalôrea 2019 – Moramanga: Mpiadina telo no maty
Nanamaloka ny fanadinana bakalôrea 2019 ity teto Moramanga ny fahafatesan’ny mpiadina miisa telo tamin’ireo tokony hiatrika fanadinana nanomboka omaly.
Tovovavy iray nindaosin’ny fahafatesana tamin’ny fotoana niatrehany adina ara-panatanjahantena (EPS).
Ny kandida faharoa narary. Nentina notsaboina tany Antananarivo saingy tsy tana ny ainy.
Ny fahatelo maty noho ny lozam-pifamoivoizana tao Ambohitranjavidy tamin’ny lalam-pirenena faha-44 ny alahady 29 septambra firavan'ny Fiangonana atoandro, andro mialoha ny fanombohan’ny fanadinana bakalôrea.
Avy any ambanivohitry ny Kaominina Mandialaza ity kandida ity. Noheverin'ny fianakaviana ho sangany, izay sambany vao hisy hanala bakalôrea, dia nifarimbonan'izy rehetra ny fanohanana azy.
mardi, 01 octobre 2019 19:19
Première pluie à Tana
mardi, 01 octobre 2019 16:20
Parc Ankarafantsika: 1 308 ha ny ny velaran-tany may, ka ala ny 252 ha
1 308 hektara ny ny velaran-tany may tao amin’ny valanjavaboahary Ankarafantsika nanomboka ny 23 septambra 2019, araka ny tombana nataon’ny MNP (Madagascar National Park), ka ala ny 252 hektara tamin’io. Efa voafehy ny afo.
mardi, 01 octobre 2019 16:13
Antenimierandoholona: Fanonganana Senatera
Nandefa taratasy any amin’ny Fitsarana avo momba ny Lalampanorenana (HCC) ny filohan’ny Antenimierandoholona, Rakotovao Rivo, maka ny hevitry ny HCC ny amin’ny fanonganana (déchéance) Senatera. tamin’ny 27 septambra 2019 no ao amin’ny firatekan’ny HCC ny taratasy mahakasika izany.
Fifidianana depiote: Ireo tarehimarika tsara ho fantatra navoakan’ny HCC
Namoaka tatitra ara-tarehimarika manodidina ny fifidianana solombavam-bahoaka notanterahina tamin’ny 27 mey 2019 ny Fitsarana avo momba ny Lalampanorenana (HCC) araka ireto hita amin’ny sary manaraka ireo.
mardi, 01 octobre 2019 16:04
Sambava: Tafakatra 2 000 ny isan’ny Bajaj na « Tuc Tuc » miasa
Manaitra fa ny Bajaj vao tonga androany dia efa lasa manao fitateram-bahoaka eto an-drenivohitry ny Faritra SAVA, na tsy mbola manana laharana na « immatriculation » aza.
Tao Vohémar no nalaza teo aloha ho manao toy izao, fa ankehitriny dia tonga eto Sambava ny « Tuc Tuc » tsy manana laharana nefa miasa.
Raha ny voasoratra ao amin’ny Kaominina dia zara raha misy 800 ny « Tuc Tuc » ara-dalana.
Fizahantany: 500 000 no tanjona amin’ny 2023
Mametraka vina hampiantrano mpizahatany vahiny manodidina ny 500 000 i Madagasikara amin’ny 2023.